haween taageeraayey kooxda Dacish oo la qabtay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA haween taageeraayey kooxda Dacish oo la qabtay
Ciidamada Boliiska dalka Singapore ayaa xabsiga dhigay sadex hween oo lagu eedeeyay in ay taageero dhaqale u fidin jirene koxda Islaamiga ah ee Daacish.
Haweenkaan oo ka soo jeeda dalka Indonisiya,waxaa muddo u dhaxeysa lix ilaa 13-sano ay ahaayeen shaqaale ka xoogsada Gudaha dalka Singabuur .
Sadexdaasi haween ayaa kala ah Anindia Afiyantari, oo 33-sano jir ah, Retno Hernayani oo 36-sano jir ah iyo Turmini oo 31-sano jir ah, waxayna samaysteen shabakad xiriirka qadka ah oo ay la wadaageen kooxda ISIL.
Dowladda ayaa sheegtay in saddexda haween ay sidoo kale ahaayeen kuwo gacansaar la leh shabakado shisheeye oo ka dambeeya argagixisada caalamka,waxaana warku intaa ku daray in xarigga haweenkaasi uu muujinaayo sii socoshada fikirka qaldan ee kooxda. ISIL.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo New York lagu guddoonsiiyay abaalmarin Caalami ah
Next articleKenya oo si kulul uga jawaabtay Jabuuti
Somaliland oo ka Qayb-galaysa Tartan Orodada Caalamiga ah